अघिल्लो सातान्तले धेरै नेपालीहरुलाई विशेषगरी टेक्सासवासीहरुलाई निकै व्यस्त वनायो । न्युयोर्कको वसाईमा गरिने यसप्रकारको व्यस्तता मैले यतासरेपछि गरेको पहिलो अनुभव हो । डलास शहरमा शुक्रबार वेलुकादेखि शुरु भएको त्यो व्यस्तता आईतबार अवेरसम्म चलेको थियो । समाचार र विचारमा कलम चलाउने मिडियाका साथीहरुले समाचार र विचारका श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु लगातार संप्रेषण गरिरहे । अमेरिकाको व्यस्त जीवनचर्यामा म पछाडी परे ।
स्थलगतरुपमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई सकेपछि ढिलै भएपनि मैले पनि केहि लेख्ने जमर्को गरेको छु । विषयवस्तु र घटना एउटै भएपनि आआफ्नै दृष्टिकोण र शैली हुन्छन । मैले देखेका र अनुभव गरेका कुराहरुको फेहरस्ती तपाई पाठकवृन्दसँग पस्किने जमर्को गरेको छु ।
शुक्रबार वेलुकी नेपाली काँग्रेसका नेता एवं नेपाल सरकारका परराष्टमन्त्री डा प्रकाशसरण महत र सोहि पार्टीका केन्द्रिय सदस्य युवानेता कल्याण गुरुङको उपस्थितिमा कांग्रेसको प्रवासी संगठन जनसम्पर्क समितिले भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा कुनै वेला निकै विवादको विषय वनेको समितिले भुकम्पपीडितका नाममा उठाएको रकम मन्त्री डा. महतलाई हस्तान्तरण गरेको खवरले जनसम्पर्क समितिलाई विशेषगरी नेतृत्वपंक्तिलाई निकै खुशीको वहार प्रदान गरेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । यसका साथै सोहि कारणले विवादित संगठन दुई नेताहरुको रोहवरमा मेलमिलापको समाचार ल्याउन सफल भयो ।
भोलिपल्टको एनआरएनको कार्यक्रममा भागलिन आएका मन्त्री डा. महतको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर आलोचना नेपालबाटै शुरुभैसकेको थियो । यसबारे आफ्नो तर्क सार्वजनिक गर्दै भोलीपल्टको एनआरएनको कार्यक्रम स्पष्टीकरण दिदै थिए । यो कार्यक्रम सानो होइन महत्पूर्ण हो । यो ठूलै हिस्सा हो नेपालको क्षमता र दक्षता भएकाहरुको यो उपस्थितिले विशेष प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसोभन्दै गर्दा उनको भ्रमणलाई अधिकांस प्रवासीहरुले आलोचना गर्ने कुरैभएन वरु आफ्नो पनको महसुस गरे । जसको प्रत्यक्ष फाईदा जनसम्पर्क समितिले उठायो । भुकम्पपीडितको नाममा उठेको विवादित वनेको रकम मन्त्रीलाई हस्तान्तरण मात्र गरेन पदाधिकारीवीचको चर्को झगडालाई भित्र कोठामा थामथामथुमथुम पार्दै वाहिर मिलेको सन्देश दिन सफल भयो । यता मन्त्रीको भ्रमण आफ्नै कारणले आलोचनाबाट पुरै वन्चित थिएन ।
भोलीपल्ट अर्थात शनिवार आयोजित एनआरएन अमेरिकाको कार्यक्रम पाँचौ साधारण सभाको लागि अघिल्लोदिनमै मानिसहरु सभाहल रहेको होटेलमा जम्मा हुँदैथिए । उदघाटनको क्रममा कार्यक्रममा देखिएका साँस्कृतिक झाँकीहरुले कार्यक्रमको तयारी र सन्देशलाई वोकेका थिए । वहुभाषा र जातलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एकताको सन्देश दिन सफल यस सभाको आयोजनाको लागि स्थानीय आयोजकद्धय संयोजक एवं आयोजक संस्थाका उपाध्यक्ष राम सि पोख्रेल र सहसंयोजक एवं च्याप्टर अध्यक्ष उत्तम लामिछानेलाई धन्यवाद दिन कसैले सायद कन्जुस्याँई गरेहोलान ।
एनआरएन कार्यक्रम सहभागिताको हिसावले उदघाटन आकर्षक लाग्यो । भलै अरु फोरमहरु उत्साहजनक थिएनन । नेपालमा निकै आलोचना संस्थाको मुटु मानिने विधानको चर्को छलफललाई लिएर केहि पत्रकार साथीहरुले आफ्नै टिप्पणी गरे तर मैले त्यो छलफललाई स्वभाविक नै ठाने । संस्थाको विधानबारेका छलफल हिउजस्तो चिसो मनभन्दा आगोजस्तै न्यायोपनमा गरिन्छन् ।
यसवाहेक केहि महिना वाँकी एनआरएनको चुनावको चहलपहल शुरु भैसकेको महसुस त्यहाँ गर्न सकिन्थ्यो । एनआरएनकै केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार पन्तको उपस्थितिले केन्द्रिय चुनाव र अमेरिकाको चुनावको झझल्को दिन्थ्यो । स्थानीय आयोजकवाहेक पदाधिकारीहरुसवैलाई चुनाव लागिसकेको रहेछ । हालसम्म सवैभन्दा वढि ठाउमा उपस्थिति जनाएको जनसम्पर्क समितिका साथीहरुसँग एनआरएनको आसन्न निर्वाचनका पदाधिकारीको जोड घटाउ शुरु भैसकेको रहेछ । पत्रकार साथीहरुको एउटा झुण्ड पनि यस विषयमा छिनोफानो गर्ला जस्तैगरि केहि प्रत्यासीहरुको चाकडीमा लिप्त देखिन्थ्यो ।
सवाहेक केहि महिना वाँकी एनआरएनको चुनावको चहलपहल शुरु भैसकेको महसुस त्यहाँ गर्न सकिन्थ्यो । एनआरएनकै केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार पन्तको उपस्थितिले केन्द्रिय चुनाव र अमेरिकाको चुनावको झझल्को दिन्थ्यो । स्थानीय आयोजकवाहेक पदाधिकारीहरुसवैलाई चुनाव लागिसकेको रहेछ । हालसम्म सवैभन्दा वढि ठाउमा उपस्थिति जनाएको जनसम्पर्क समितिका साथीहरुसँग एनआरएनको आसन्न निर्वाचनका पदाधिकारीको जोड घटाउ शुरु भैसकेको रहेछ । पत्रकार साथीहरुको एउटा झुण्ड पनि यस विषयमा छिनोफानो गर्ला जस्तैगरि केहि प्रत्यासीहरुको चाकडीमा लिप्त देखिन्थ्यो ।
कुनै वेला नेपालमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको वालुवाटारमा आयोजित पत्रकार भेटघाटको क्रममा चियाको चुस्कि खाँदै प्रधानमन्त्री होइन आफै देश चलाईरहेको जस्तो ठान्ने कतिपय पत्रकारको तस्विर ताजै गरायो । मन्त्री डा. महतलाई मुलधारको पत्रकारिताको लागि आवश्यक पर्ने खालका जिज्ञासाहरु मैले महत सामू एनआरएन अमेरिकाको कार्यक्रम र आफ्नै संस्थाको भेटघाटमा राखेको थिए । राष्टियताको सवालमा दुई छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँगै नेपालले आपसी सम्वन्धमा सन्तुलन राख्न नसकेको र एनआरएन र नेपाल सरकारको एकअर्काप्रतिको आरोपप्रत्यारोप विशेषगरि भुकम्प र त्यसपछिको पुनर्निमाणको विषयलाई लिएर को विषयमा थियो । यसवारे जवाफ दिदै मन्त्री डा. महतले नेपाल राष्टियताको सवालमा दुवै देशसँग नझुक्ने खरो टिप्पणी गरेका थिए भने एनआरएनले देशप्रति देखाएको देशभक्ती व्यवहारको कदर गरे ।
आईतबार नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाले गरेको एनआरएनकै विषयलाई लिएर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । क्षेत्रिय कोर्डिनेटर किसन रेग्मि र सदस्यदद्धय बाल जोशी र लेखनाथ गौतमको समन्यमा हामीले कार्यक्रम राखेका थियौं । धेरैसमयपछि भौतिकरुपमा पदाधिकारीसाथीहरुसँग भेट गराउन सम्भव गराईदिने टेक्सासमा रहेको नेजा टीमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै भेटघाटमा संस्थाप्रति वफादार साथीहरु पूर्व अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, महासचिव तोया दाहाल, कोषाध्यक्ष शैलेस पोखरेल, क्षेत्रीय संयोजक धुव्र कँवरप्रतिपनि आभारी छु । त्यसैगरि नेजासम्वद्ध अन्य आदरणिय साथीहरु सुरेश पोखरेल, केदार तिमिल्सिना, निदेश अधिकारी, विकल पराजुली, सन्तोष न्यौपाने, शरद पोखरेल, विजय घिमिरे, विकासराज न्यौपाने, तारा वराल, वीटु केसी, शेर केसी, सर्वग्य वाग्ले लगायतका भेटले निकै खुसी वनायो ।
मन्त्री अघिल्लोदिनमै नेपाल फर्केपछि एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी भएका धेरैले यो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाए । यसवाहेक परराष्टमन्त्री डा महत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा अर्जुन कार्कीसँग हामीले गरेका औपचारिक एवं अनौपचारिक भेटघाट हाम्रा ठूला उपलव्धीहरु वने । कार्यक्रममा एनआरएन अमेरिकाका वर्तमान अध्यक्ष संस्थाले क्षमता र दक्षतामा अगाडी वढ्दै गरेको दावी गर्दै थिए । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसावले आसन्न निर्वाचनको बारेमा वोल्दै गर्दा एकसेएक अव्वल उमेदवार वन्न सक्ने लक्ष्य देखिन्थ्यो जसमध्ये अध्यक्ष पदका एक जना उमेद्वार गौरी जोशीले आगामी नेतृत्वको लागि आफुलाई चुने आफुले ५ सय जना नेपालीहरुको जिवन परिवर्तन गर्ने आस्वासले धेरैको ध्यान तानेको थियो । त्यस्तै महिलाको तर्फबाट नेतृत्वमा आउन सक्ने अप्रत्यक्ष दावी गर्दै रविना थापा, वन्दना कोइराला र अन्यपदका प्रत्यासीहरुका भनाईहरु रसपूर्ण थिए ।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसावले आसन्न निर्वाचनको बारेमा वोल्दै गर्दा एकसेएक अव्वल उमेदवार वन्न सक्ने लक्ष्य देखिन्थ्यो जसमध्ये अध्यक्ष पदका एक जना उमेद्वार गौरी जोशीले आगामी नेतृत्वको लागि आफुलाई चुने आफुले ५ सय जना नेपालीहरुको जिवन परिवर्तन गर्ने आस्वासले धेरैको ध्यान तानेको थियो । त्यस्तै महिलाको तर्फबाट नेतृत्वमा आउन सक्ने अप्रत्यक्ष दावी गर्दै रविना थापा, वन्दना कोइराला र अन्यपदका प्रत्यासीहरुका भनाईहरु रसपूर्ण थिए ।
एनआरएन अमेरिकाका दुई कार्यकालहरुको समिक्षासहित आसन्न निर्वाचनलाई लिएर हामीले आयोजना गरेको छलफलमा वरु संस्थासम्वद्ध उमेरले पाका तर क्षमताले काँचो वुद्धिभएका साथीहरुको उपश्थिति देखिएन । थाहा गर्दागर्दै पेशागत संगठनको कार्यक्रममा नियोजित ढंगले अनुपस्थिति भएको पुष्टि त त्यतिवेला भयो जतिवेला उनीहरुको उपस्थिति सोहिदिन आयोजित रात्रिभोजका कार्यक्रममा फुर्सदिलो पारामा देखिन्थ्यो । पेशागत चरित्र छैनभने आफुलाई मिडिया र पत्रकारको संज्ञादिनु हास्यासपद मात्र होइन सरमको विषय पनि हो ।
एनआरएन अमेरिकाको न्युजर्सीमा आयोजित अघिल्लो कार्यक्रमको शैली विगारेर प्रसंग कोट्याउदै गर्ने औलामा गनिने केहि पेशाकर्मीहरुको कुन्ठाको जवाफ म यति मात्र दिन सक्छु कि त्यो घटनाका विषयमा नेजाले निकालेको विज्ञप्ति पेशागत स्वाधिनताको रक्षाका निम्ति थियो । नेजाले सामान्य मर्यादा र विवेक नभएका एनआरएनका खास व्यक्तिहरुको बारेमा प्रतिक्रिया मात्र जनाएको थियो यदि संस्थागत सम्वन्ध नभएको र नराखेको भए यसैपाली पनि सोहि संस्थाको विषयमा वहस र छलफल गराउने थिएन ।
न्युयोर्कमा वस्दै आएका मित्र विजय पौडेलले प्रकाशन गर्दै आएको विश्वसन्देश साप्ताहिकको दशौ वर्षगाँठ आईतवारै आयोजना गरेका थिए । प्रवासमा वसेर पेशागत रुपमा उनले गरेको सफलताको वधाई मैले पनि अंश पाएको महसुस गरे । प्रवासमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको नेतृत्व गरेको वेला यसप्रकारको उपलव्धी महसुस गराउने मित्र पौडेललाई धन्यवाद नदिइरहन सक्तिन ।
न्युयोर्कबाट प्रकाशित हुदै आएको आफ्नो पत्रिकालाई नेपालीहरुको वाक्लो वस्ति भएको ठाउ टेक्सासबाट पनि निकाल्ने उनको सोचलाई खुलेर प्रसंसा गर्दै शुभकामना पनि दिए । अन्तिममा आईतवारै आयोजना भएको अन्तिम कार्यक्रमलाई पनि समेटन मन लाग्यो । आदरणिय मित्र डा अंगराज तिमिल्सिनाले आफ्नो भाईको रात्रिभोजमा निम्ता दिएका थिए । तर मित्र तोयाजी वेलुकी फर्किन हतार गरेकाले उनलाई एअरपोर्टसम्म छोडन म र अर्का मित्र लेखनाथजी गयौं । झरीले हामीलाई निकै सकस दिएको थियो तर पनि लेखनाथजीको निडर सवारी चलाउने सीपको मनमनै कदर गरिरहे । अन्तिमका दुई कार्यक्रमहरु विजयजीको पत्रिकाको वर्षगाँठ र आदरणिय मित्र अंगराज तिमिल्सिनाको भाईवुहारीको विवाहपार्टीमा सहभागिताको हिसावले खासै न्याय दिन सकिएन ।
माथीका कार्यक्रमको ठूलो उपलव्धी भनेको साथीभाईहरुसँगको भेट थियो । अहिले विच अमेरिकामा वसेको मलाई आफुले छोडेका ठाउहरु विशेषगरि न्याुयोर्क र कोलोराडोका मित्रहरुसँगको भेटले फरक अर्थ राख्यो । अहिलेसम्म जीवनमा कमाएको चिनजान मात्र भएकाले अमेरिकाको इष्टकोषदेखि वेष्टकोष्टबाट आएका साथीहरुको भेटले आनन्द लिदै म अहिलेको वसाई भएको टेक्सासको लवक शहरमा रहेको आफ्नै घरमा फर्किए । घर फर्किदा पनि मेरो ठाउ हेर्नको लागि मेरा कलेजका सहपाटी निदेश अधिकारी पनिसँगै थिए । एकदिन वसेर भोली पल्ट उनी भर्जियातिर लागे । जे होस यसपटकको सप्तान्त हरेक हिसावले यादगार रह्यो । लेखमा थुप्रै भेटघाट र व्यक्तिविशेषको नाम लिन नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।
लेखकः नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)का अध्यक्ष हुन् ।